Shiinaha Warshadaha Gelatin ee warshadaha Jelly Glue iyo alaab-qeybiyeyaasha. Gelken
Dib-u-celinta kuleylka ee gelatin
Dib-u-noqoshada kuleylka ayaa ah sifooyinka gaarka ah ee loo adeegsado gelatin: alaabooyinka leh gelatin waxay ku jiraan xaalad xal markii la diiriyo iyo marka la qaboojiyo. Isbadalkani wuxuu u dhici karaa si deg deg ah waxaana lagu celin karaa marar badan iyada oo aan wax isbedel ah lagu sameynin astaamaha aasaasiga ah ee alaabooyinka.
Filim sameynta hantida gelatin
Xalka gelatin ayaa si isku mid ah loo dahaadhan karaa si loo sameeyo filim khafiif ah oo u dhexeeya labada weji ee xalka iyo jelka.
Calaamadda, baakadaha, gaadiidka, kaydinta gelatin warshadeed
Magaca badeecada, magaca soo saaraha, cinwaanka warshadda, astaanta ganacsiga, nooca wax soo saarka, tirada dufcadda, taariikhda wax soo saarka, xuduudaha ugu muhiimsan iyo waxyaabaha saafiga ah ee sheyga ayaa si adag loogu calaamadeyn doonaa xirmada alaabta . Shahaadada tayada wax soo saarka iyo lambarka caadiga ah ee la qaatay waa inay ku jiraan xirmada. Calaamadaha sawirka ee xirxirida, keydinta iyo gaadiidka waa inay waafaqaan shuruudaha GB / T191
Baakadaha wax soo saarka ayaa loo qaybiyaa lakabyada gudaha iyo dibedda, lakabka gudaha waa bacda PE, banaankana waa bacda kraft, oo ay tahay in si adag loo xirxiro. Lakabka kore waa inuu ahaadaa mid nadiif ah, qalalan oo adag, una hoggaansama heerarka caafimaadka ee u dhigma iyo xeerarka la xiriira.
Alaabooyinka waa in lagu qaadaa gawaari nadiif ah oo hawo leh oo daboolan si looga hortago qoyaanka iyo kuleylka, waana inaan lagu dhex darin walxo sun ah.
Alaabooyinka waa in lagu keydiyaa bakhaar gudaha ah oo hawo leh, hawo leh oo nadiif ah si looga fogaado qoyaanka, waana inaan lagu dhex darin sun, fudud oo wasakhda alaabada.
Hore: Gelatin-warshadeed oo loogu talagalay koollo
Xiga: Warshadaha Gelatin ee ciyaarta